Mogadishu Journal » Madaxweyne C/raxmaan Faroole oo ku eedeeyay dowladda in aysan raali ka aheyn nidaam-ka federaaliisam-ka
Mjournal :– Madaxweynaha maamul gobolleedka Puntland C/raxmaan Sheekh Max’ed Faroole oo siweyn uga soo horjeestay hishiiskii maalin ka hor magaalada Addis Ababa ay ku gaareen dowladda federaalka iyo maamulka Jubba.
Waxaa uu sheegay madaxweyne Faroole in mas’uuliyiinta dowladda federaalka marnaba raali ka aheyn in uu dhismo nidaamka federaaliisam-ka sida uu hadalka u dhigay, islamarkaana awood buuxda la siiyo maamul gobolleedyada.
”Waxaan u arkaa hishiiska la sheegay in uu Addis Ababa ka dhacay mid la doonayo in leysaga horkeeno beellaha wada dega gobollada Jubbooyinka, dowlada marnaba raali kama ah in ay dhismaan maamulada gobollada.” ayuu yiri C/raxmaan Faroole.
Puntland ayaa horay siweyn taageero ballaaran ugu muujisay maamul gobolleedka Jubbaland, laakiin lama oga sababta keentay in xiligan madaxweyna Faroole uu ka soo horjeesto is faham dhaxmara dowladda federaalka iyo maamulka Jubba.
Ilo xog-ogaal ah ayaa sheegay in madaxweynaha maamul gobolleedka Puntland leyska hortaagan ka qeyb-gallka munaasabadii lagu kala saxiixanayay hishiiska labada dhinac ee ka dhacday magaalada Addis Ababa, taasoo keentay ayaa la leeyahay in uu ka soo horjeesato hishiiska.
Puntland horay waxaa ay u sheegtay in ay xiriirka u jirta dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud, inkastoo madaxweynaha dowladda federaalka uu sheegay in ay diyaar u yihiin wada hadal lala galo Puntland si looga qanciyo waxyaabaha ay tabanayaan.